5 သြစတြီးယားရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ဗီယင်နာကနေအကောင်းဆုံးနေ့ခရီးများထွက်ခြင်း | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >5သြစတြီးယားရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ဗီယင်နာကနေအကောင်းဆုံးနေ့ခရီးများထွက်ခြင်း
ဗီယင်နာတစ်ရေပန်းစားသည် ခရီးသွားဦးတည်ရာ, အဓိကအားဖြင့်ဒါဟာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ကြောင့်၎င်းမှာကမ်းလှမ်းဖို့အများကြီးရှိသည့်မြို့ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်
သို့သျောလညျး, ဒါကြောင့်လည်းတခြားစိတ်ဝင်စားဖို့တည်နေရာကဝိုင်းတစ်မြို့ဖြစ်၏. သငျသညျဗီယင်နာကနေတစျနေ့ခရီးစဉ်များအတွက်အချိန်ရှိပါက, ဘယ်မှာသင်သည်သင်၏အာရုံစူးစိုက်မှုဖွင့်သင့်တယ်? ကျနော်တို့ဆက်ဆက်လိမ့်မည်ဟုအချို့သောအကြံပြုချက်များရှိသည် မင်းအနားယူပါ သြစတြီးယားတွင်ပိုမိုစွယ်စုံ. ထို့အပွငျ, သင်မဟုတ်ရင်သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အချိန်အောင်မပြုစေခြင်းငှါအခြို့သောအရပ်တို့ကိုကြည့်ရှုရန်ရနိုင်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းမှာကြည့်ဖူး5သင်ကြိုက်နှစ်သက်စေခြင်းငှါ, သြစတြီးယားရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ဗီယင်နာကနေအကောင်းဆုံးနေ့ခရီးများထွက်ခြင်း!
1. Discover သြစတြီးယား – Hallstatt
အဲဒါကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့ရှည်လျားလွန်းယူမထားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ Hallstatt ဗီယင်နာကနေတစျနေ့ခရီးစဉ်များအတွက်စုံလင်သည်, ထိုသို့လုံးဝရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဖြစ်ပါသည်. သို့သျောလညျး, သငျသညျလျှင် ရထားယူပြီး Hallstatt မှ, နံနက်ယံ၌စောစောပိုင်းတွင်သွားရ, ဒါကြောင့်သင်လုံလောက်သောအချိန်ရှိသည်လိမ့်မယ်. ဒါဟာဗီယင်နာကနေအရှည်ဆုံးနေ့ကခရီးစဉ်များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, နှင့် ကောင်းသောစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်. ဒါပေမဲ့, သငျသညျရှိပါတယ်တစ်ချိန်က, ခံစားရန်ပဒေသာလည်းမရှိ. ခရီးသွား, ဓါတ်ပုံတွေကိုယူပြီး, ဒါမှမဟုတ်ဆောင်းရာသီတွင်ရေခဲဂူသွားရောက်လည်ပတ်အားလုံးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရွေးချယ်မှုများမှာ.
Salzburg အလွယ်တကူဖြစ်ပါသည် ရထားသုံးစွဲနိုင် ဗီယင်နာကနေ, ထိုသို့အရှိဆုံးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့နေ့ကခရီးစဉ်များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဥပမာအားဖြင့်, Salzburg အတွက်, သငျသညျက၎င်း၏အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ Baroque အဆောက်အဦးများနှင့်အတူသမိုင်းဝင်မြို့လယ်စူးစမ်းလေ့လာလို့ရပါတယ်. ထိုအခါ Hobensalzburg ခံတပ်လည်းမရှိ, အရာသင်မြို့ရဲ့အကောင်းဆုံးမြင်ကွင်းကိုနှင့်အတူပေးသွားမှာပါ.
ထို့အပြင်, သငျသညျသွားရောက်နိုင် Mozart ၏နေအိမ်, ယခုတစ် ပြတိုက် နာမည်ကျော်တေးရေးဆရာအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူရန်အရာအများအပြားနှင့်အတူ. ပို. ပင်, သငျသညျသူနှစ်ခြင်းခံခဲ့သည်ရှိရာ Salzburg ဘုရားကျောင်းမှာသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်.
3. Lainzer တောရိုင်းပန်းခြံစေရန်တစ်ဦးကနေ့ခရီးစဉ်
သငျသညျတစျနေ့ခရီးစဉ်များအတွက်မြို့မှဝေးရဖို့ရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျရှေးခယျြစရာအများအပြားရှိသည်. သူတို့ထဲကတစ်ခုမှာ Lainzer ဖြစ်သည် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်, သင်ဗီယင်နာဝုဒ်ထဲတွင်ရှာတွေ့နိုင်သည့်. ရှေးခေတ်သပိတ်ပင်နှင့်ဘုစပတ်ပင်များဖြင့်လှပသောသဘာ ၀ သဏ္youာန်သည်မင်းကိုနတ်သမီးပုံပြင်သို့ကူးပြောင်းသကဲ့သို့ခံစားမိစေလိမ့်မည်.
ယခင်တုန်းက, ဤအရပ်ဌာနအများအပြားမှူးမတ်တစ်ဦးအကြိုက်ဆုံးမဲလိုက်စားကျက်ခဲ့. ယနေ့တွင်, သငျသညျကိုလိုက်ရှာနိုင်မနိုင်, သို့သော်သင်ခံစားနိုငျ လှပသောတောင်တက်လမ်းကြောင်း အဖြစ် Hubertuswarte နက္ခတ်ကနေရှုမြင်.
ရုံ 40 ဗီယင်နာကနေမိနစ်ခရီးစဉ်, သင်ဤရေကန်ကျောက်မျက်ရှာဖွေနိုင်သည် - Laxenburg Castle. တည်နေရာတစ်ချိန်ကဈေးကွက်မြို့ဖြစ်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်အခုကဗီယင်နာကျက်သရေတစ်ခုပါထို့အပြင်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်. ဥပမာအားဖြင့်, သငျသညျ၎င်းငျး၏တဦးကိုခံစားနိုင်ပါတယ် အများအပြားစားသောက်ဆိုင်, ပင် sunlit လယ်ကွင်းများနှင့် အိုင်ပေါ်သို့ထွက်ရွက်လွှင့်.
5. လက်ဝါးကပ်တိုင်ကျောက်ခေတ် Castle
ဗီယင်နာ၏အနီးတစ်ဝိုက်ရှိ, တစ်ညားလည်းမရှိ အလယ်ခေတ်ရဲတိုက် သငျသညျစူးစမ်းလေ့လာလို့ရပါတယ်. Kreuzenstein ယင်းမှော် Hogwarts အများအပြားခရီးသွားများအတွက်သတိပေး, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ spiers နှင့်ထွက်နေတဲ့၏. ပိုကဘာလဲ, ဒါကြောင့်မတူနိုင်တဲ့ကမ်းလှမ်း, ရင္သပ္ရႈေအမြင်ချင်း ဗီယင်နာဝုဒ်နှင့်ညု၏. ထို့အပြင်, အဆိုပါ Leobendorf ရွာအားဖြင့်နီးကပ်, အရာသင့်ရဲ့တစ်နေ့တာခရီးစဉ်အပေါ်သင်တို့အဘို့အကောင်းတစ်မှတ်တိုင်ရှိနိုင်ပါသည်.
နေ့ခရီးစဉ်မှကြွလာသောအခါဗီယင်နာကမ်းလှမ်းရန်ရှိပြီးအရာရာကိုကြည့်ဖို့အဆင်သင့်? ကျွန်တော်တို့ရဲ့မဆိုနှင့်အတူ5သြစတြီးယားရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ဗီယင်နာကနေအကောင်းဆုံးနေ့ခရီးများထွက်ခြင်း, သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကတန်ဖိုးရှိပါလိမ့်မည်. သင့်ရဲ့အားလပ်ရက်ကိုခံစားခြင်းနှင့်ရန်သေချာစေရန်ပြင်ဆင် စာအုပ်၏ရထားလက္မွတ္မ်ား အချိန်မှန်!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “5 သြစတြီးယားရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ဗီယင်နာကနေအကောင်းဆုံးနေ့ခရီးများထွက်ခြင်း” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-day-trips-from-vienna%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#traveleurope Daytrips eurotrip ရထားခရီးစဉ် travelaustria traveltips